Google Mepu inowedzera mifananidzo yeApple Park mu3D, asi yechinyakare | IPhone nhau
Mamiriro eApple Park nhasi afambira mberi zvakanyanya, zvekuti sekureva kwaApple vamwe vashandi vanga vatove kushanda munzvimbo yakavharidzirwa, asi mifananidzo inogadzirwa kuburikidza nesatellite yeGoogle neApple mepu inoratidza Apple Park isina kupera, ne zvishoma kufambira mberi. Zviripachena mune iyo Google Mepu ivo vakatovandudza kakati wandei uye izvi zvakaonekwa mune yekupedzisira skrini kana isu tikabata chishandiso kubva pawebhu, asi zviri pachena haisi iyo yazvino mamiriro enzvimbo mune iyo 3D maonero, asi yakavandudza zvakanyanya.
Shanduko dzichienzaniswa neyakavandudzwa yapfuura dzinozivikanwa uye kuwedzera iyo 3D sarudzo chinhu chinonakidza nekuti chinotibvumidza kutamba nemaonero zvishoma uye nekucherechedza zvimwe zvekuvakwa. Kana isu tikadzvanya CTRL uye kudhonza Tinogona kushandura maonero ezvatiri kuona uye tinozviona zvichinakidza kuona zvimwe zvinhu zvakaita semahofisi akatopedzwa nhasi, nzvimbo yokupaka mota, gomo kuti uone saiti yese kana imba yaSteve Jobs pachayo.
Zvirokwazvo kufambira mberi muApple Mepu kana Google Mapplication zvinoshandiswa zvishoma nezvishoma asi zvinogara zvichingoitika uye vanotitendera kuti tive nenguva yekunakidzwa nekutenda kune iyo 3D mashandiro akaitwa kwenguva yakati. Zvino zvaizove zvakafanira kunatsiridza resolution yacho zvishoma uye izvo zvidiki diki pane iyo mepu pachayo, asi ichi chinhu chisiri nyore kuita sezvo chichi sanganisira satellite mapikicha. Aya mafomu ari kuita zvirinani mazuva ese asi se4k ndege dzedrone hapana chekucherechedza kubva mudenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Google Mepu inowedzera mifananidzo yeApple Park mu3D, asi yechinyakare
Teregiramu inosvika vhezheni 4.0 ichiwedzera mameseji evhidhiyo uye kuenderana neApple Pay